MAQAAL XASAASI AH: DHAB KA HADAL AMMAANKA SOOMAALIYA & HALISTA CUSUB – Puntlandtimes
November 4, 2017 W LAASCAANO
Waxaa dhab ah oo la isku raacay in ammaanka Soomaaliya uu soo xumaanayo, yahayna mid aad u liita. Dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay, boqollaal qof baa nafta ku waayey qaraxyo baabuurta xammuulka loo adeegsaday, laguna bartilmaansaday xarumo Muqdisho caan ka ah.
Awoodda qaraxyada, dhimashada, baaba’a iyo hantiburburka ka dhashay qaraxii 14ka Oktoobar waxa uu ahaa mid aan horay loo arag in ka badan rubuc qarni ay Muqdisho dhib iyo halaag la daalaadhacaysay.
Labadaan qarax ee kala danbeeyey ee arxanlaawayaasha argagixisadu ay fuliyeen waxaa dabasocda eed ah in ay wateen Waraaqaha Aqoonsiga Nabadsugidda Qaranka, taas oo ayana keentay in diiradda la saaro Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya (NISA).
Waxaa la iswaydiinayaa su’aalo rasmi ah oo ku saabsan hoggaanka hay’adda, xirfadooda sirdoon, iyo waliba awoodda iyo hab-maamulka hay’adda.
Saas oo ay tahay, sidee bay hadaba suurtagal ku tahay in shaaca laga qaado xaqaa’iqa maanta jira, looguna sheego ummad muragaysan oo naxdintii ka badatay in “iftiinkii soo bidhaamay” shalay uusan runtii iftiin ahayn ee uu ahaa tareen bilaa bareeg ah, rogmanaya, waxna aan reebidoonin? Sidee la yeelaa oo dadkan wax loogu sheegaa ayaga oo hadana quus iyo niyad-jab laga dhowrayo? Dhibka maanta jiraa waa kaas, saas oo xaal yahayna, runta lagama gabbadee waa in runta la sheegaa.
Soomaaliya waxbaa haysta, waqtina waa ku socda. Si lamid ah ammuraha kale ee dalka maanta haysta, ayaa sidoo kale hay’adaha sirdoonka iyo kuwa ammaankuba aysan maanta dowladda Soomaaliyeed gacan ugu jirin. Kaba sii daran e, dowladdu maba laha karti iyo hammi siyaasadeed oo ay ku baadigoobto waxa haysta iyo waxa sababaya toona.
Laba-kaladaran-dooranka Lahaanshaha Dalka
Soomaaliya waxaa si daran ugu faafay nidaamka hantibadsiga (hantigoosad) ee dadka iyo dalka lagu feenanayo, kaas oo maanta xad iyo xadduud toona aan lahayn, addunkana meel kasta looga kala yimid. Waxa loo socdaa hantida dabiiciga ah ee dalka oo kaliya ma aha, oo taas waa mid Soomaaliya ay dalal badan kala siman tahay, laakiin waa midda ay Soomaaliya billad dahab ah ku haysto saddex waxyaalood oo baaba’a horseeda: musuqmaasuq, xirfad-darro, iyo daacad-xumo dalka. Bal isweydii oo intee dal baad taqaan oo dal wabaa martigaliyo tobaneeye laamo sirdoon iyo kuwo ammaan oo hadana mid kastaa hoggaan iyo maamul gooni ah leeyahay? Tusaalayaal iga hoo:
Midi waa albaabka iska-dabawareega kaas oo ah mid hoggaanka fashilmay ee laamaha ammaanka midba maalin la keeno, mid kalena maalin kale.
Sannad walba taliye cusub baa la magacaabaa, mid kalena waa la cayriyaa. Kii la keenay wuxuu wataa in la qabiil iyo la midab ah, kii tagey asna wixii uu kal hore la yimid buu la noqdaa.
Kuwo waa kuwo ahaan jiray hoggaamiyayaal al-Shabaab oo leh taariikh aad u foolxun, aan maalin cas
weydiisan Soomaalida ay dhaceen, dhibeen, dhaawaceen, iyo kuwa dhintay, saas oo ay tahayna inta dowladdu ay gacanta midig soo qabatay, oo haah, ay gacanta ka saartay xilal sarsare, kuwo laamo dowli ah, iyo waliba kuwo aad muhiim u ah sida NISA.
Kuw kale waa kuwa ka shaqaysta sancada Waraaqaha Aqoonsiga ee laamaha sirdoonka dowladda. Waraaqaha Aqoonsigu waa kuwo markii la rabo la heli karo, kaliya gado oo hadba qiimaha ay joogaan iska bixi. Waxba ha yaabin maxaa yeelay kan xukuma sancada Waraaqaha Aqoonsiga waa mid mushaarkiisu yahay bishii $200, laakiin halkii Aqoonsi ku heli kara labajibbaar mushaarkiisa. Qof walbaa waa rabaa in uu Aqoosigaas helo, tan ugu muhiimsan ee loo rabaana waa si looga gudbo isbaarooyinka, oo waa warqadda tus, kana dhaqaaq, maadaama aysan jirin aalad lagu hubiyo jiritaanka aqoonsiga, magaca wataha, iyo waliba shaqadiisa.
Kuwo kale waa dhowrka hay’ado ammaan iyo kuwo sirdoon ee ka socda shanta maamul goboleed ee qabiilka ku dhisan, kuwaa oo magaca NISA wada wadaaga, laakiin “hay’ad dowli ah” astaantooda aan laheyn. Badankoodu waxay ka amarqaataan dowlad daris ah ama dowlad kale.
Kuwo waa hoggaamiyayaasha siyaasadda ee musuqmaasuqu aafeeyey kuwaas oo ilbiriqsi ku iibinaya danta ummadda Soomaaliyed, kana iibinaya mid kasta oo la yimaada boorso lacag ah, ama awood u leh in uu gacan ku siiyo helitaanka jago ay raajicinayaan ama siihaynta boos ay hayaan.
Waxaa jira kuwo kale oo ku jira ama ka agdhow ilaha saameynta Soomaaliya ku leh, sida wasiirada ama xildhibaanada, oo hadana ah mulkiilayaal hay’ado ammaan sugid, kana faa’iida liidashada ammaan ee dalka.
Kuwana waa kooxaha ama karteelada ganacsatada dhulka hoose oo ah dhiigmiirato ay naacoow u tahay in aan waxba isbadalin.
Mid kale waa shirkadda Blackwater (shirkadda Biyo-madow) iyo mashruuceeda ‘hormarinta nabadda adduunka sida uu u arko Erik Prince’ asaga oo ay hoos iyo hoosaasin u yihiin Dowladda Imaaraadka Carabta iyo shirkadeeda DP World ee ka ganacsata lahaanshaha iyo maamulka dekedaha adduunka.
Midna waa Dowladda Ingiriiska oo xiran shaarka UNSOM si ay u ilaashato shirkadeeda cusub ee ay mar dhaweyd Soomaaliya ka yagleeshay, waa Soma Oil iyo Gas. Waa wajiga hore ee deegaanka Xalane, ahna hoy ay isugu yimaadeen nooc kasta, kan wanaagga wada, kan xun, iyo kan foolxun iyo ciidamadooda calooshooda-u-shaqaystayaasha.
Dhammaantood waxaa gacanta ugu jira macaanka iyo kharaarka marna ammaanka lagu
adkeeyo, marna lagu liida, hadba kii ay doonaan.
Dhanka kale waa Dowladda Maraykanka. Waana AFRICOM iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee dowladda Soomaaliya ka gargaara kahortagga argagixisada, qaabilsan tababarka ciidamada argagixiso-ladirirka iyo mushaar-bixintooda, hoggaankuna waa Dowladda Maraykanka.
In kasta oo hawlgalada Maraykanka ee Soomaaliya aysan aheyn sir aad u qarsoon, hadana waxa ay saaxadda siyaasadda si rasmi ah uga soo muuqdeen kaddib dilkii ciidamo komaandooska Maraykanka ee loo yaqaan Green Beret, iyo doorkooda Afrika markii afar ciidamadaas kamid ah lagu dilay dalka Niger.
Arrinkan waxa uu noqday mid baraarujiya warbaahinta iyo xildhibaanada Maraykanka, lagana doodo hawlgalada qarsoon ee Maraykanku uu ka wado Afrika, meesha awal warkoodu uu aad u yaraa.
Intaas oo marxaladood oo kore way adagtahay in farta lagu iqokee, ama kuwee ayaga oo isbiirsanaya, baa sababay in argagixisadu waayahaan danbe ay ku tallaabsato aragagax iyo wuxuushnimo intaas le’eg.
Go’aan-xumo lagu Gaddoomayo
Sidii looga bartay, dowladdu isla markiiba waxa ay la soo booday hawsheedii argagixiso-ladirirka: al-Shabaab iyo ISIS baa falkaan lagu halaagmay ka danbeeyey. Waxa ay rabaan in ay Soomaali tirtiraan, sidaas darteed, aan gacmaha isqabsano oo aan godadkooda ugu galno. Waxa aan qaadaynaa dagaal kii ugu weynaa, dhinacyo badan iyo gobolo kala duwan baan ka soo jihaysan doonaa, “anna waxaad iga heli doontaan safka
hore,” baa laga hayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo).
Bal hadde ogoow argagixisadu – cidda ay rabto ha ahaato e, al-Shabaab ama kuwa kale ee dhammaantood dhexda uga jira hawlo waxa ay yihiin aan la aqoon – waxa ay hawlahooda halaagan ka fuliyaan isbaarooyinka iyo baraha ciidamada ee dhan kasta oo Muqdisho. Haddii aadan ogowna bal hadde ogoow quwadda maanta adduunka ugu weyn oo wadata boqollaal kun oo ciidamadeeda kuwa ugu fican waxba waa ay ka tari weyday
argagixisada Ciraaq iyo Afqanistaan. Saas oo ay tahay Madaxweyne Farmaajo inta dagaal iclaamiyey buu hadana diyaarad qaatay asaga oo ciidan u raadsaday Itoobiya, Yugaandha, Kenya iyo Jabuuti, ‘si uu al-shabaab meel u saaro, si kamadanbeys ahna uu meel uga soo haro.’
War Sidee Saan Iyo Saanxumada Looga Baxaa?
Si loo nabadeeyo Soomaaliya waa in marka hore meel lagu ogaadaa dhammaan halxiraalayaasha ammaanka. Tan kale, waa in la ogaado in halaagga ismiidaaminta ee al-Shabaab ka sokoow, ammaandarada sii liidaneysa waxaa qayb ka aha iskumilanka ammuuraha kor ku sharraxan,kuwo gudaha ah iyo kuwo shisheeyaba.
Soomaaliya waa mashruuc lagu faa’iidey, watana rabitaanka caalamka, waa sac gobolka u irmaan oo la iska listo, waana goob u furan in laga faa’iideysto, ciidan kastana isku diyo.
Laakiin waa goob ay go’doon ka tahay dowladdii lahayd ee la rabay in ay danaha shacabkeeda ilaaliso, inta
kalena uu midba rabo in uu kan kale daaqadda kala baxo, kana ilaaliyo in uu danihiisa fushado. Meel dowladdii lahayd la go’doomiyey, kuwii go’doomiyeyna madaxa iskula jiraan baa waxaa ka dhashay nidaam halaagsan oo “gacanba gacanta kale dhaqayso” taasna waxa ay keentay ammaandarro joogto ah, laakiin si loo maamulan karo.
Shacabka Soomaaliyeed waxa ay astaahilaan sidan si ka roon, waxa ay astaahilaan wax ka roon hoggaan aan karti lahayn iyo musuqmaasuq joogtoah.
Soomaaliya waa in ay heshaa hoggaan karti leh oo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed meel ku ogaada; hoggaan og in ammaanka aan meel cidla ah laga helin; hoggaan leh aragti siyaasadeed kuna hammiya dib-u-heshiisiin dhab ah oo taabata qalbiga iyo wadnaha ummadda; hoggaan leh karti siyaasadeed oo uu si degdeg ah ugu garaabagediyo laamaha ammaanka ee hadda hawlgabka ah ama si silloon hawshooda u guta; hoggaan leh karti uu ku habeeyo hoggaanka iyo hawlgalka qaybta sirdoonka; hoggaan dalbada deedna hubiya in Soomaaliya albaabka hore laga soo galo, lehna istaraatajiyad ay ku doorato saaxiibka iyo iskaashiga saxan.
Illaa iyo inta la muujinayo meelna la saarayo ammuurahaas aasaasiga ah, Soomaaliya cidna ku badbaadi mayso, Soomaali ama martideeda toona (inta la ogyahay iyo inta aan la ogaynba). Ammaankuna markaas waa waqtiga yar ee u dhexeeya qaraxa dhacay iyo kan soo socda.
Abukar Arman waa qoraa, diblomaasi hore, waana bulsho-u-adeege falaanqooyinkiisa siyaasadda adduunka iyo diinta aad loo daabaco, loona daalacdo. Wuxuu wax ku qoraa Foreign Policy Association http://foreignpolicyblogs.com/author/abukararman/